जहाजभित्रै चोरी, २ चिनियाँ नागरिक पक्राउ - Everest Dainik - News from Nepal
काठमाडौं । त्रिभुवन विमानस्थलमा जहाजभित्रै चोरी गरेको आरोपमा दुई जना चिनियाँ नागरिक पक्राउ गरेका छन् ।
प्रहरीले राहदानी नं. इजी ६८४२७२२ बाहक क्यूआई म र राहदानी नम्बर इजी ५७४२५२३ बाहक सिन्जोङ हुलाई पक्राउ गरेको हो ।
टर्किस एयरलाइन्सबाट बुधबार काठमाडौं आएका उनीहरुले जहाजभित्रै डेनमार्कका नागरिकको सुन र नगद चोरी गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।
याे पनि पढ्नुस १२२ चिनियाँलाई १ हजार जरिवाना!
प्रहरीलाई खबर प्राप्त भएअनुसार शनिबार बिहान टर्किस एयरलाइन्सबाट स्तानबुल जान लागेका बेला उनीहरुलाई चोरी भएको सुनको बाला दुई वटा र विभिन्न देशका मुद्रासहित पक्राउ गरिएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ ।
घटनाको विषयमा महागनरीय प्रहरी वृत्त, गौशालाले विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको जनाइएको छ ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल एयरपोर्ट नजिक डेरा गरी बस्ने ४५ वर्षीया गंगा गिरीको कोठामा चोरी भएको छ ।
शनिबार साँझ सुनका विभिन्न गहना र नगद ४ हजार रुपैयाँ समेत गरी करिब २ लाख ८४ हजार रुपैयाँ चोरी भएको हो ।
काठमाडौं–९ सिनामंगल डेरा गरी बस्ने सुन्दरीजल घर भएकी ४९ वर्षीया चन्दा तामाङको कोठाबाट पनि चोरी भएको प्रहरीले जनाएको छ । घटनाको विषयमा अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
याे पनि पढ्नुस विमानस्थलमा बाँस्कोटालाई कालो झण्डाः एक पक्राउ, ७ घाइते
ट्याग्स: चाेरी, चिनियाँ नागरिक, त्रिभुवन विमानस्थल